के हो लिनक्स ? - Living with ICT
Home / Featured / के हो लिनक्स ?
Shiva Basnet Nov 30, 2016	Leaveacomment
युनिक्सजस्तै लिनक्स कर्नेल प्रयोग गर्ने कम्प्युटर सञ्चालन प्रणालीलार्इ दिइने नाम हो । लिनक्स खुला तथा स्वतन्त्र सङ्खटवेयरमध्येको अभूतपूर्ण उदाहरण हो । लिनक्स अथवा जिएनयु र लिनक्स कम्प्युटरका लागि एउटा free and open source software, operating system हो । याे भनेको स्वतन्त्र तथा खुला स्रोत सफ्टवेयर हो । यसमा free भनेको निःशुल्क होइन, स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग हो । लिनक्स एउटा कम्प्युटर सञ्चालन प्रणाली हो । लिनक्सलाई मोबाइल फोन, ट्याब्लेट कम्प्युटर, भिडियो गेम कन्सोल, मेनफ्रेम कम्प्युटर र सुपर कम्प्युटरजस्ता विभिन्न हार्डवेयर उपकरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Previous राजधानीमा रोबोटिक्स प्रतियोगिता ‘यन्त्र ५.०’ सम्पन्न
Next सुरक्षित एटीएम सेवाका लागि सानिमा बैंकले चिपमा आधारित कार्ड ल्याउँदै